I-Ashampoo Snap 12 -izikrini zeWindows kunye nokurekhodwa kwevidiyo-Sikhupha iilayisensi ezi-5
ikhaya/Ukhuphiswano/I-Ashampoo Snap 12 -izikrini zeWindows kunye nokurekhodwa kwevidiyo-Sikhupha iilayisensi ezi-5
Vangelis11. Matshi 2021
I-Ashampoo Snap 12 ikhutshiwe ngemisebenzi emininzi emitsha. Oku kwenza ukuba kube lula ukuthatha izikrini kunye nokurekhodwa kwescreen kwidesktop. Hlela ukurekhoda kwakho ngaphandle kwesoftware eyongezelelweyo, ugcine efini okanye wabelane ngayo nge-imeyile.
I-Ashampoo Snap 12
I-Ashampoo Snap 12 ilunge kakhulu ekusetyenzisweni kwangasese okanye kwintengiso. Thatha izikrini kunye nevidiyo zayo nayiphi na into ebonakalayo kwiscreen kwiWindows. Kwabanye kunokwenzeka ukuqala ukurekhoda ngokulibaziseka kwexesha kunye nokulungelelanisa indawo yokurekhoda.
ahampoo® Snap 12
Indawo entsha yokurekhoda
Ukurekhodwa okunemisebenzi emininzi kwimimandla engonxantathu, amaphepha agqityiweyo nokuskrola
Oopopayi, ocacileyo ujongano lomsebenzisi
Umhleli kuyilo olutsha, lwangoku
Izinketho ezibalulekileyo kanye kwindawo yokurekhoda
Entsha, cacisa useto lwencoko yababini
Sondela kwiindawo ezikhutshiweyo ezahlukileyo Ubungakanani befestile kananjalo ezahlukeneyo Ukujonga ukurekhodwa ivuliwe. Ngokudibanisa ngokukodwa imizobo, izicatshulwa kunye neziphumo, ulwazi oluninzi lunokuhanjiswa ngokukhawuleza nangokucacileyo.
Unokwenza isifundo ngenkcazo yemifanekiso I-Ashampoo Snap 12 Nceda uphumeze yonke le nto. Ukongeza kwimisebenzi emininzi, ukubonwa kwesicatshulwa kukwayinxalenye ebaluleke kakhulu yesoftware yokuvavanya kunye nokukopa ukurekhodwa. Oku konga ixesha kunye nomzamo kuba awudingi ukuthayipha yonke into ngaphakathi.
Imifanekiso kunye neevidiyo esele zenziwe azinakugcinwa kuphela, kodwa zikwalayishwe kwinethiwekhi yoluntu, zithunyelwe okanye zigcinwe kwilifu. Iividiyo zinokunqunyulwa, zidityaniswe kwaye zigcinwe kwiziqendu kumhleli wazo.
Kwinguqulelo entsha, indawo yokurekhoda yenziwe ngokutsha ngokutsha kwaye isekwe kwitekhnoloji entsha, yobungqina bexesha elizayo.
I-Ashampoo Snap 12 Ungayisebenzisa le nkqubo ngasese unelayisensi enye kwiikhompyuter ezi-3.
Inkqubo yokwenza: 10 Windows, Windows 8, Windows 7
Ikhompyutha: Nayiphi na ikhomputha exhasa iinkqubo zokusebenza ezidweliswe ngasentla. Iinkqubo ezineeprosesa ze-ARM azixhaswanga.
Iintlobo ngeentlobo: ukuba ukwenziwa kusebenze Unxibelelwano lwe-Intanethi luyafuneka kwinkqubo.
ixabiso: EUR 39.99, USD 39.99, GBP 34.99, CAD 59.99, AUD 59.99, CNY 379.00, CHF 49.99, BRL 129.99, RUB 2199.00, PLN 159.99, ZAMA 249.00, SEK 389.00, NZD 59.99, MXN 599.00, ZAR 499.00, TWD 1399.00, HKD 339.00, HUF 12500.00, DKK 299.00, NOK 349.00
Iilwimi: IsiNgesi saseBritane, isiBulgaria, isiTshayina (Esiqhelekileyo), isiTshayina (Esenziwe lula), DeutschIsiNgesi, isiFinnish, isiFrentshi, isiHebhere, isiTaliyane, isiKorea, isiDatshi, isiNorway Nynorsk, isiPolish, isiPhuthukezi, isiPhuthukezi (saseBrazil), isiRomania, isiRashiya, isiSweden, isiSerbia, isiSerbia, iSlovak, iSlovenia, iSpanish, isiCzech, isiTurkey, isiHungary.
ubukhulu: I-152,73 MB, i-156.396 kB, i-160.149.012 B
I-Passta-Idatha yokufikelela ngokulula kunye nolawulo lwegama eligqithisiweyo-Sikhupha iilayisensi ezili-10
Umphathi weHotkey KeyCtrl -Sipha iilayisensi ezili-15
I-Pamu-Slide-umbulali we-airpod kunye ne-bass ekhohlakeleyo-ukhuphiswano
Wazama i-EaseUS yokuBuyisa iNkcukacha ngeWizard 12.6-Sikhupha iilayisensi ezi-5
shicilela avi umfanekiso weskrini umfanekiso okhawulezayo thatha umfanekiso okhawulezayo Isishicileli sevidiyo lwekhusi thatha izikrini Ukurekhoda ividiyo